Sheek Aadan Maxamed Nuur (Sh. Adan Madoobe) ayay xubnaha Golaha Shacabka ee Soomaaliya ay mar kale u doorteen inuu noqdo Guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka 28-kii April ee sanadkan, waxaana uu xilkaasi si rasmi ah ula wareegay Sabtidii shalay.
Wareysi: Safiirka Soomaaliya ee Turkey oo ka hadlay xaaladda Macalimuu
Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Mucalimuu oo maalintii Axadda lala beegsaday qarax ismiidaamin ah ayaa xalay la dhigay isbital ku yaalla Turkiga.
Mareykanka oo ka dhabeeyay hanjabaadihii Itoobiya iyo Mali
Dowladda Mareykanka ayaa Sabtidii shalay ahayd ka jartay dalalka Itoobiya, Mali iyo Guinea barnaamij ganacsi oo canshuur dhaaf ah oo loo sameeyo wax soosaarka waddamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha.
Barnaamijka Haweenka iyo Arrimaha Qoyska: Talaalka COVID-19 ee Carruurta.
Barnaamijka Haweenka iyo iyo Arrimaha Qoyska ee toddobaadkan waxaa mari noogu ah Asli Xaaji Aaden Ashkir oo ah kalkaaliso caafimaadka guud, ahna la taliyaha caafimaadka ee hay'adda Briva Health, islamarkaana la shaqeysa Jaamacadda Minesota waaxda carruurta.
Xal ma loo heli karaa dhibaatooyinka ka jira jidadka magaalada Muqdisho?
Darawallada gaadiidka Bajaajta ee ka dhex shaqeysta magaalada Muqdisho ayaa aad uga cabanaya waddooyin xumo ay sheegeen inay ku haysato magaalada, waxayna sheegayaan in bishii ay bixiyaan 15 dollar oo cashuur ah, hase ahaate aan lacagtaas loogu qaban adeegga xagga waddooyinka ee ay u baahan yihiin.
Xiisadda Egypt, Sudan, Iyo Ethiopia ee Wabiga Nile
Wasiirrada arrimaha dibadda ee Jaamacadda Carabta ayaa Talaadadii ku kulmay dalka Qadar, iyagoo diiradda saaray dadaalka la doonayo in lagu xalliyo khilaafka biyo xireenka webiga Nile ee u dhexeeya Masar, Suudaan iyo Itoobiya.
Barnaamijka Qoyska ee toddbaadkan ayaa waxa uu ku saabsan yahay xaaladda dadka ku nool degaannada go’doonsan ee gobolka Bakool iyo dhibaatada haysta qoysas badan oo dhowaan ka soo barakacay tuulooyin 40 ka badan oo ku yaala gobolka Bakool.
Qoyska: Sidee Qoysaska Soomaalida Carruurtooda uga Caawiyaan Waxbarashada inta Lagu Jiro Covid-19?
Barnaamijka Haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Zahra Mustaf oo ah dhaq dhaqaada qoysaska Soomaalida ee daggan magaalada Melborn ee waddanka Australia.
Waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho lagu dilay Dr. Xasan Cusman Ciise oo ku magac dheeraa Dr Buurane oo ahaa dhaqtar ku takhasusay cudurada maqaarka, wuxuuna ka mid ahaa dhaqaatiirta ugu caansan Soomaaliya.
Xaggee mareysaa qaadashada Tallaalka COVID-19 ee Soomaaliya?
Qaadashada talaalka COVID -19 ayaa ka socota magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka, waxaana qaadashadiisa mudnaanta koowaad la siiyay dadka loo bixiyay safka hore.
Qoyska: Habdhaqanka Ninka Soomaliyeed Marka ay xaasaskiisu umuleyso.
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay habdhaqanka ninka Soomaliyeed marka ay xaasaskiisu umuleyso
Sharciyada Socdaalka ee Biden oo Rajo Galiyay Soomaalida Maraykanka.
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay sharciyada socdaalka ee uu dhowaan saxiixay madaxweyne Biden iyo rajada ay galisay Soomaalida Maraykanka
Machadka daraasaadka ee Heritage ayaa faalo kooban oo uu shalay soo saaray diginin ugu diray beesha caalamka, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyo siyaasiyiinta Soomaalida in ay suurtogal tahay in uu dalka ka dhaco dagaal haddii aan la qaboojin xiisadda siyaasadeed.
Haweenka iyo Qoyska: Korinta Carruurta ee Qoysaska Dhadhaab
Qoysas badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa la kufaa kaca korinta caruurtooda. Badi qoysaska xeryaha ayay noloshoodu ku tiirsan tahay garaamaadka ay ka helaan hay’adda UNHCR ee gacanta ku haysta xereda.
Haweenka iyo Qoyska: Hooyo Dhowr iyo Toban Carruur ah Ku Korsatay Australia.
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Muumino Cabdi Caynab oo labaatankii sano e la soo dhaafay dagganeyd dalka Australiya.